Rohingya Poem – The Art Garden Rohingya
Posts tagged "Rohingya Poem"
Tag: Rohingya Poem
Jun 15, 2020 AGR POETRY
ဖြူ စိမ်းဝတ်စုံ ရေးဖွဲ့သူ- Qurshid Alam@ Maung Maung Tin ဖြူစင်တဲ့နို့ရည်နဲ့ စိမ်းလန်းတဲ့သစ်ရွက်ပမာ ဖြူဖွေးဖွေးအင်္ကျီ စိမ်းတိမ်းတိမ်းဘောင်းဘီက ကျောင်းဝတ်စုံပါ။ ဘာမသိ အရွယ်ကပင်၊ အလင်းထုံသည့်ဘဝသို့၊ ယူဆောင်သွားသည့် ယူနီဖောင်းက ကျောင်းဝတ်စုံ‌ပါ။ စိမ်းဖြူစုံဝတ်ချိန်တိုင်း လူအိုလူငယ်၊ လူဆိုးလူယုတ်တို့၏ ခင်မင်လေးစား၊ နှစ်သက်ခံရတဲ့ ကျောင်းဝတ်စုံ‌‌ပါ။ ကျီးကန်းအုပ်မှာဗျိုင်းတစ်ကောင် အဝေးကမြင်နိုင်သလို၊ ဒေါင်းအုပ်ထဲမှာကျီးတစ်ကောင် အယောင်မဆောင်နိုင်သလို၊ လူထုထဲမှာကျောင်းသားဟု ရွေးထုတ်နိုင်သည်က ကျောင်းဝတ်စုံပါ။ ဖက်ရှင်ဝတ်စုံ၊ ရိုးရာဝတ်စုံ၊ အမျိုးသားဝတ်စုံ၊ ရှေးဟောင်းဝတ်စုံ ဝတ်စုံတကာထဲ အလှဆုံးနဲ့ အကျိုးနပ်ဆုံး ဝတ်စုံကား ကျောင်းဝတ်စုံတဲ့။ (15-06-2020) #TheArtGardenRohingya
ဘ၀ဒဿန ရေးဖွဲ့သူ- မင်းဝန်ဇော် ၁။ နိဗ္ဗာန်မမြင် ငရဲမသိ သံသရာမလျှောက် ငါလူသား ဒီကမ္ဘာရောက်။ ၂။ လေ့လာသမိုင်း ပထ၀ီပိုင်းနဲ့ ဒဿနမျိုးစုံ အယူပေါင်းနဲ့ ကြုံကာ ငါလူသား ရူးပြန်အား။ ၃။ စီးပွားချမ်းသာ အာဏာဗလနဲ့ မျက်စိနီမြန်း ဘာမထီဘဲ လျှောက်လှမ်း ကမ္ဘာ ငါက ငါတည်း။ ၄။ ချမ်းသာသုခ ငါခွဲမမြင် ချမ်းသာတခါ ဆင်းရဲတလေ့ ပြန်တလဲလဲနဲ့ ကုန်ခဲ့သည်ကား ငါ့ဘ၀။ ၅။ ပဉ္စခန္ဓာ ဓါတ်မမျှတော့ ချင်းချင်းကွဲကွာ ဇာတိပြ၏။ ၆။ လဲလျောင်းမြေသား မြေပေါ်မှာ မြေသည်အဘ မြေသည်အမိ အမှီပြု၍ နိဂုံးချုပ်ခဲ့ သုဿန်မယ်။ (15-06-2020) #TheArtGardenRohingya
"အချစ်ဒဏ္ဍာရီ" ရေးဖွဲ့သူ- Mohammad Erfun Amin အချစ်သည် ဖြောင့်မှန်လျှင် မွှေးကြိုင်တယ် အချစ်သည် ဟန်ဆောင်လျှင် မှိုစော်နံတယ် အချစ်သည် အတ္တဆန်လျှင် ခေတ္တခံတယ် အချစ်သည် သစ္စာကင်းလျှင် ဖောက်ပြန်တယ် အချစ်သည် ငွေနဲ့နွယ်လျှင် အောက်သို့ဆင်းတယ် အချစ်သည် မိဘနဲ့နွယ်လျှင် နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ် အချစ်သည် အန္တိမ မှန်လျှင် တာရှည်ခံတယ် (15-06-2020) #TheArtGardenRohingya
Heal The World By Heydayet Ullah Heydayet Khan Heal the world, by saving your life, your family, your community, your country, and your world. Is not cure better than prevention? To save the world, shall not we take precautions? Heal the world, by following social awareness and ...
Cry from IDP Camp By Zahedul Haque My right to birth - threatened My right to childhood - deprived My right to freedom - discriminated My right to identity - unrecognized My right to practice religion - banned My right to ...
Jun 13, 2020 AGR POETRY
RECITE MY NAME WITH THE BEAUTIFUL NAME People call me witharacist name. I recite their name inabeautiful theme. People shame me with my colour of skin. I recite its indifference inabeautiful grin. People ...
စစ်တလင်းက သစ်ပင်ကြီး ရေးဖွဲ့သူ- Dialogue Partner & Lalmoti Khan သီးချိုကြိုင်မွှေး ပွင့်လန်းဆင်၍ ငြိမ်းအေးသာယာ ရိပ်ကြီးကြီးနှင့် ခိုနားသူမခြား ရင်အေးစေသည့် စစ်မြေပြင်က သစ်ပင်ကြီးသည် ငါ့မေတ္တာနှင့် ဆင်တူယိုးမှား တူလွန်းလှပေ၏။ ဘာသာပေါင်းစုံ လူမျိုးစုံနှင့် မကွဲမခြား မိုးဒဏ်ပူဒဏ် မျှမျှတတ ထီးလိုအုပ်၍ ကာကွယ်ပေးသည့် စစ်မြေပြင်က ထိုသစ်ပင်ကြီးသည် ငါ့ဝါဒကို ကြွင်းမကျန်အောင် ဖော်ပေးနေပေ၏။ အသီးအရွက် အကိုင်းအလက် ခူးဆွတ်ခုတ်ဖြတ် ခံရသော်လည်း သစ္စာစောင့်တဲ့ ကုလားအုတ်နှယ် နာခံလိုက်လျော စစ်တလင်းက ထိုသစ်ပင်ကြီးသည် ငါ့သည်းခံခွင့်လွှတ်စိတ်ကို ထပ်တူပြု၍ ဖော်ကျူးနေပေ၏။ ထက်မြလွန်တောက် လွှသွားကောက်နှင့် ပင်စည်မြေထိ အသေဖြတ်ချိန် နာကျင်ဝေဒနာ ပြင်းခံစားသည့် စစ်တလင်းက ထိုသစ်ပင်ကြီးသည် ကျည်ဆံထိမှန် သတ်ဖြတ်ခံရချိန်ဝယ် ခံစားရသည့် ငါ့မျိုးတို့၏ နာကျင်ဆင်းရဲမှုကို ရောင်ဟပ်နေပေ၏။ (13-6-2020) #TheArtGardenRohingya
ရဲတပ်သားဆီက စီးကရက် မီးခိုးငွေ့တွေ
ရဲတပ်သားဆီက စီးကရက် မီးခိုးငွေ့တွေ ရေးဖွဲ့သူ - မောင်ဆောင်းခ စီးကရက်ခဲရင် Back Camera နဲ့ ဗီဒီယိုလေး ရိုက်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်သိက္ခာက ဒီလိုပါ ကျွန်တော်တို့ မေတ္တာတရားက ဒီလိုပါ ကျွန်တော်တို့ လူ့အခွင့်အရေးက ဒီလိုပါ။ မှိုင်းမိထားတဲ့ စောက်တလွဲ အငြိုးအတေး။ 'မော်မကြည့်နဲ့၊ စော်ရှိရင် စားမယ်။ ကုလားကို သတ်တာ ဘုရားလို မြတ်တယ်။ ရိုက်သတ်ပစ်။ မအေ -ိုး တွေ' သူတို့ရဲ့ အတွေးဟာ အဏုမြူဗုံးထက် အဆတစ်ရာ ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ သတင်းထုတ်ဖာရေး အဖွဲ့ဟာ လွတ်သွားတဲ့ အောက်စကို (မဲပြာပုဆိုးနဲ့) ကပျာကယာ လှမ်းအုပ်လိုက်တယ်။ မောင်းတောက ...
သုံးရောင် ရေးဖွဲ့သူ- ရိုမရုန်(န) အဖြူရောင်နံရံ လေးဖက်ထဲ တစ်မျိုးကရဲရဲတောက် အနီရောင် တစ်မျိုးက နှစ်ရောင်စပ် နောက်တစ်မျိုးက အမည်တပ်ခွင့်မရှိတဲ့အရောင် နံရံလေးဖက်ထဲ ရက်တွေကြာလာတော့ အရောင်သုံးရောင် ရင်းနှီးလို့ တကယ့် မိသားစုရင်းသဖွယ် တစ်ရောင်နဲ့ တစ်ရောင်ဖေးမကြ ကူညီကြ၊ အားပေးကြနဲ့ ယုံကြည်မှုခြားတာကို အတွေးထဲကပျောက်လို့ အတွေးထဲတစ်ခုပဲကျန်တယ် ငါတို့ဟာ တူညီတဲ့အရောင် ငါတို့ဟာ ဂုဏ်နဲ့ပြောင်နဲ့ ငါတို့ဟာ လောကတန်ဆာပါပဲ။ အပေါ်ယံအရောင်ခွဲတွေနဲ့ မိရိုးဖလာကိုးကွယ်မှုကိုအစွဲပြုလို့ တစ်ရောင်ကိုတစ်ရောင် နားလည်မှုလွဲကာမျက်စောင်းခဲကြ တောကြောင်တွေ လက်ခမောင်းခတ်လို့ ပွဲတော်ကြီးဆင်နွဲကာ ရိုးသားတဲ့အရောင်တွေ ဘဝတွေရင်းရတယ် ကျယ်ပြန့်ဝန်း ပုပ်ဟောင်းနံနေတဲ့ ဒီအစွဲတွေ မျက်စိတစ်ဆုံး ဘယ်လောက်ထိ ထပ်စောင့်ကြည့်ရမယ် ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီသုံးရောင်တည်း ကမ္ဘာတည်လို့ ငါအေးချမ်းချင်လှပြီ။ (၁၀-၀၆-၂၀၂၀) Editorial Team #TheArtGardenRohingya
None Is Eternal By Ro Yassin Abdumonab No use to ask how, No use to ask why. Today, it is low , Tomorrow, it can be high. The rapid may get slow, Truth may change to lie. Things do change, Nothing remains the ...
My Time Pacifist Hoque Days pass without the wind of hope just thinking how to live up inasafer world, with all my rights. Nights pass withoutafall of slumber as all dreadful distant memories emerge in sleep as ...
ဘူမိနက်သန် ဤမြေပေါ်ဝယ် ရေးဖွဲ့သူ - ငြိမ်းချမ်းနဂျမ်း (ရိုခရီးသည်) -ဘူမိနက်သန် ဤမြေပေါ်ဝယ် သူ့မျိုး၊ သူ့ဘာသာဟူ၍ မခွဲခြားဘဲ တစ်ဥယျာဉ်တည်းရဲ့ အရောင်စုံအသွင်စုံပန်းတွေ လက်တွဲကာ စီရရီ ပွင့်ခဲ့လို့။ ရနံ့ခြားအရောင်ခြား မခွဲခြား တစ်ရေသောက်တစ်လေရှူ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ထိုဥယျာဉ်ကို အလှဆောင်နေခဲ့...။ -ဘူမိနက်သန် ဤမြေပေါ်ဝယ် လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည်နဲ့ အသက်နဲ့ရင်းပြီးစောင့်စည်းခဲ့တဲ့ သဟဇာတရဲ့ အသီးအပွင့်ဖြစ်တဲ့ ထိုလောကနိဗ္ဗာန်ကို သူ့ချမ်းသာမလိုလားတဲ့ သတ္တဝါတစ်စုက ဖျက်ဆီးလိုဖျက်ဆီးရာ ကြံယုတ်မာကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရလေပြီ။ ရှည်ကြာလှတဲ့နေ့တစ်နေ့ရဲ့ မဟာသူရိယပျောက်သွားရှာပြီ...။ -ဘူမိနက်သန် ဤမြေပေါ်ဝယ် လူဆိုလို့မွေးလာပြီကတည်းက ငါ့အနားမှာ ဝမ်းနည်းမှုလှိုင်းသရဲတွေပဲ အမြဲချဉ်းကပ်လို့ သံမဏိလှောင်အိမ်ထဲက ငှက်လို ဥပဒေဘောင်လှလှ ခတ်ထားတဲ့ ဤအမိုးပွင့် အကျဉ်းထောင်ထဲကငါ့မှာ လူလူချင်း ဖိနှိပ်ခံလို့။ လူလုပ်တဲ့ ကပ်ဆိုက်မှုကြောင့် လူစိတ်ကုန်လို့ တောရိုင်းသားလို အတ္တရဲ့ အငွေ့ဆိုးနှောနေတဲ့ အောက်ဆီဂျင်က ငါ့နှလုံးသားထဲ သောကအမာရွတ်တစ်ခုကိုပဲ တစ်ဦးဦးက ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေသလို တဖြည်းဖြည်း ရှင်သန်ကြီးထွားလို့သာ ခိုင်ခိုင်မာမာ အမြစ်တွယ်စေခဲ့လေတယ်...။ -ဘူမိနက်သန် ဤမြေပေါ်ဝယ် တစ်ချို့က ...
Mid-night Poem By Jahangir Alom Lying on the bed of death, Every inch of me is sinking In the ocean of your remembrance. My heart is sick, Tears run out in my eyes, And I'm tired of writing sad poems. I loved ...
Jun 07, 2020 AGR POETRY
A Boy With A Violin By Mujibur Rahaman I can create an arrow that makes tones To shoot at you and fix your heart Pain separates between as me too hurt Making an affection in multi-hearted zones. Nestlings on the ...
လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည် ရေးသားသူ - Shahida Win မိစ္ဆာတွေ အုပ်ချုပ် လူမဆန် ကြမ်းကြုတ် အကြောင်းမဲ့ ဝရမ်းထုတ် တွေ့သမျှ ဖမ်းချုပ် သတ်ဖြတ် မျိုးဖြုတ် အမိမြေမှ မောင်းထုတ် ခံစားချက်တွေ ပေါက်ကွဲလို့ ကဗျာအဖြစ် အပြင်ထုတ် လူမျိုးခြား ဘာသာခြား မူဝါဒချ ဆက်ခွဲခြား အဖိနှိပ်ခံဆုံး လူသား ရိုဟင်ဂျာများ ဖြစ်လာ အသက်ကို စွန့်စား မရေရာတဲ့ လောင်းကစား အမေတကွဲ သားတကွဲ အမိမြေမှ သက်လုပြေး ပင်လယ်ထဲ လချီ သစ်သား လှေစီး လမ်းမမြင် ကမ်းမမြင် သမုဒ္ဒရာလယ် မျောရင်း အအိပ်ပျက် အစားပျက် မိန်းကလေးများ ဘဝပျက် ရှင်သူရှင် သေသူသေ ကမ်းကပ်ဖို့ ကြိုးစားနေ ဆိုးဝါးလှတဲ့ ရိုဟင်ကံ ဘယ်နိုင်ငံမှ အဝင်မခံ နေရာတကာ အပယ်ခံ အသံမဲ့ တို့အသံ တိုင်တန်းနေ အရှင့်ထံ။ (၀၇-၀၆-၂၀၂၀) Editorial ...
Jun 06, 2020 AGR POETRY
Solitude By RY Mg Mg Khin Sitting alone where there is no outside interference. Listening to the heart and follow its inner voices. Taking some rest With no demands of time. Looking at the waves of ocean To find solution of my problem. (06-06-2020) Efitorial ...
Is This Life or Hell? By Nur Sadek A child without hope A man without safety A mother without treatment And me without education Is this my only fate? Beingahuman, I suffer worse than jungle's animals they can at least, sleep ...
Give Me A Chance By Mohammed Rezuwan Khan To build this brick It is awesome to see it tall Asatower for compatriot The national call of unity The chance to illume our surname And to gladden our mother land Pillaged ...
Jun 04, 2020 AGR POETRY
Deep-rooted Love By Mohammad Erfun Amin There'samusic in my heart it flows through viens in my body With inner rhythm in delight and it makes me feel much melody I feel the scent of that night it reminds me ...
My Birthday Khin Maung Soe @ E.R Jani Alom I was born inagreen land With all the spirits and loves I was welcomed auspiciously But I have brought no rose and candy. Let me edify myself today Let me ...